Jese (rain' i Davida) - Wikipedia
Jese (rain' i Davida)
I Jese dia lehilahy voalaza ao amin' ny Baiboly fa rain' ny mpajaka Davida. Atao hoe יִשַׁי / Ishai ny anarany amin' ny teny hebreo. I Jese dia zanaka lahin' i Ôbeda zanak' i Bôaza sy i Rota vehivavy môabita. Ao Betlehema no fonenany izay niompiany ondry maro. Nanan-janaka valo izy ka ny fito no fantatra anarana, araka ny Bokin' ny Tantara, dia i Eliaba, i Abinadaba, i Hama, i Natanaela, i Raday, i Ôzema ary i Davida.
Nasain' ny mpaminany Samoela mba hizara ny henan' ny ondry nataony fanatitra tamin' Andriamanitra i Jese. Nandalo teo anatrehan' ny mpaminany ny zanaka lahin' i Jese mandra-pahitany izay hotondroiny ho mpanjaka ka hanosorany izany, ka i Davida ilay faralahy no voafidin' Andriamanitra.
Taty aoriana dia naniraka an' i Davida hitondra sakafo ho an'ireo rahalahiny isan' ny miaramilan'i Saoly miady amin'ny Filistina i Jese. Tamin'izany no nahatanteraka no namonoan' i Davida an' ilay Filistina goavambe atao hoe Goliata.
Napetrak' i Davida tany amin' ny mpanjakan' i Môaba vonjimaika ny ray aman-dreniny taty aoriana. Isan' ny olona lava andro iainana indrindra tamin' ny androny i Jese, nefa mety tsy nahita ny naha mpanjaka an' i Davida.
Ny firesahan' ny Baiboly taty aoriana ny anaran' i Jese dia miaraka foana amin' ny anaran' i Davida zanany. Izany no ahitana ny anarany ao amin' ny faminanian' i Isaia (na Izaia) manambara ny fiavian' ny Mesia, manao hoe: "
1 Ary hisy Solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany; [...] 10 Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese, Izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia Izy no hotadiavin'ny jentilisa; Ary ny fitoerany dia ho voninahitra. (Isaia 11.1,10. ).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jese_(rain%27_i_Davida)&oldid=1041964"
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 09:21 ity pejy ity.